१५ वर्षमै आमा ! - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ १५ वर्षमै आमा !
१५ वर्षमै आमा !
Sindhu Khabar शनिबार, २०७६ कात्तिक ९ / १८:०५
किरण थापा, चौतारा, ९ कात्तिक ।
पाँचपोखरी थाङ्पाल गाँउपालिका–८ की २४ वर्षीया बिमाया तामाङले ८ कक्षा पढ्दै गर्दा परिवारको सहमतिमा बिहे गरिन् । पन्ध्र वर्षमै आमा बनेकी उनका ५ सन्तान छन् । नियमित तल्लो पेट दुख्न थालेपछि अस्पताल पुगेपछि मात्र पाठेघरको समस्याबाट आक्रान्त भएको उनले थाहा पाइन् ।
कलिलो उमेरमा बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी नपाएको उनले बताइन् । किशोरीमै आमा बन्नुपर्दा सन्तानको राम्ररी स्याहार गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘सानैमा बिहे गरें, बच्चा जन्मिए, एउटा स्याहार्न नपाउँदै अर्को जन्मेपछि त झन् गाह्रो भएको छ’, उनले भनिन् । कलिलो उमेरमा गरिएको विवाहले २४ वर्षको उमेरमै पाठेघरको समस्याबाट ग्रसित हुँदा उहाँलाई निकै पिर परेको छ । ‘पाठेघरको समस्या छ, काम गरेर सन्तान पाल्न निकै कठिन छ’, तामाङले गुनासो गरिन् ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–२ बद्लाङकी २१ वर्षीया जुना थापाका तीन सन्तान छन् । पन्ध्र वर्षमै भागी विवाह गरेकी उनले १६ वर्षमा पहिलो सन्तान जन्माइन् । अठार र बिस वर्षको उमेरमै थप दुई सन्तान जन्माएकी जुनालाई किशोरीमै आमा बन्नुपर्दा आत्मग्लानी भएको छ । स्वास्थ्यमा असर हुने र बच्चाको स्याहार राम्रोसँग नहुने हुँदा किशोरीमै आमा बन्नु गलत भएको उनले महसुस गरेकी छिन् । पाँचपोखरी थाङ्पाल गाँउपालिका –८ लप्सेकी सीता तामाङले ९ कक्षा पढ्दै गर्दा भागीविवाह गरिन् । १६ वर्षमै गर्भवती भएकी सीताले ६ महिनामै बच्चा गुमाइन् । त्यसपछि तीन पटकसम्म गर्भवती भए पनि उनको सन्तान हुन सकेको छैन । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर देखेपछि उनले भागेर विवाह गरेकी हुन् । ‘पटक–पटक चेकजाँच गर्दा थाहा भयो, कलिलो उमेरमै विवाह गरेका कारण मेरो सन्तान हुन सकेको छैन’, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा उपचार गराएकी उनले भनिन्, ‘साथीहरू पढ्दै छन््, मलाई अहिले छिटो विवाह गरेर जीवन नै बर्बाद गरेँ जस्तो लाग्छ ।’
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । जिल्लामा कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने र किशोरीमै आमा बन्न थालेका छन् । जिल्लामा किशोरी आमा बन्ने क्रम रोकिएको छैन । गाँउगाँउमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य चेकजाँच गराउने गरेपनि प्रसुती भने घरमा नै गराउने प्रचलन घरगाँउमा रहेको छ । यसरी सानै उमेर अर्को त घरमा नै प्रसुती गराउनु स्वास्थयको हिसाबले जोखिम रहेको स्वास्थयकर्मीहरुको तर्क छ ।
जिल्लामा बालविवाह गर्नेको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि जिल्ला अस्पताल चौतारामा पछिल्ला ३ वर्ष गर्भवती जाँच गर्न आउने किशोरीको संख्या घट्दो भने छैन । गाँउगाँउमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि किशोरी उमेरमा नै आमा बनेकाहरुको चेकजाँज बढी हुने गरेको पाँचपोखरी थाङ्पाल –८ ओखरेनी स्वास्थ्य चौकीकी अहेव समीता दोङले बताइन् ।
जिल्ला अस्पतालका अनुसार गर्भजाँच गर्न १५÷१६ वर्षका किशोरी आउने गर्छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो पढ्ने उमेरमै भागेर विवाह गरेका हुन् । मेलम्ची नगरपालिकाको वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जाँच गराउने किशोरीको संख्या झन्डै ११ प्रतिशत रहेको नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र घोरासैनीले बताए ।
‘यो त किशोरी गर्भवती भएर स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आएको तथ्यांक मात्रै हो, सबै किशोरी जाँच गर्न नआउने र सेवा लिन आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर पनि जाने भएकाले किशोरी आमाको संख्या बढ्न सक्छ’, घोरासैनीले भने, ‘सुगम ठाउँमै यो संख्या हुनु राम्रो संकेत होइन ।’ बालविवाहबारे सचेतना कम हुनु, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुजस्ता कारणले किशोरीमै आमा बन्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
२० वर्षमुनिको विवाहलाई कानुनले स्वीकृति दिएको छैन । तर, अभिभावकको सहमतिमा हुने बिहेका कारण किशोरीमै आमा बन्ने क्रम जारी छ । महिला स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिमपूर्ण रहँदासमेत किशोरीमै आमा बन्ने क्रम नरोकिनु चिन्ताको विषय भएको मेलम्ची नगरपालिकाका उपप्रमुख भगवती नेपाल बताउँछिन् । यसरी नै किशोरी आमाहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआएमा भोलिको दिनमा झन खतरा हुने उनको तर्क छ । यो आर्थिक बर्षदेखि कोशोरीहरुको लागी बजेट सहितको कार्यक्रम लागू गर्ने उनले बताइन् । पहिलाको चलनमा जस्तो सानो उमेरमा हुने बिवाह कम भएपनि भागेर बिवाह गर्नेहरुले गर्दा किशोरी आमाको संख्यामा कमि नआएको उनको भनाई छ ।
मेलम्ची नगरपालीका ९, की १९ वर्षीया सुधा विक गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन नसकेपछि आफन्तले हतारहतार धुलिखेल अस्पताल लगे । उनलाई लामो समयदेखि प्रसूति व्यथा लागेको थियो । अस्पतालका चिकित्सकले शल्यक्रियामार्फत प्रसूतिको तयारी गरिरहेको बेला उनले बच्चा जन्माएकी हुन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा आउनेहरुको बढे पनि धेरैको संख्यामा घरमा सुत्केरी हुनेहरुको संख्या रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख दुर्गादत्त चापागाँईको भनाई छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि किशोरी उमेरमा नै आमा बन्नेहरुको संख्या उदेश्य अनुरुप नरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख चापागाँईले बताए । जिल्लामा क्रियाशिल रुपमा काम गरिरहेका सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायसंगको समन्वयमा पनि किशोरी शिक्षा र बालविबाहको असरको बारेमा सचेत गराउने काम भईरहेको उनको भनाई छ । साथै पत्रपत्रिका र स्थानिय रेडियोहरुमा पनि सचेतना जगाउने खालका सुचनाहरु प्रकाशन र प्रशारण गर्दै आईरहेको उनले बताए ।
विकसित मुलुकमा किशोरावस्थामा आमा हुन लागेका तथा भइसकेका महिलाका लागि छुट्टै परामर्श केन्द्र हुन्छन् । यस्ता केन्द्रले सानै उमेरमा गर्भधारण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन भने गर्दैनन् । किशोरी आमालाई बच्चाको पालनपोषण गर्ने कार्यविधिका साथै व्यक्तिगत विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछन् । तर, हामीकहाँ किशोरी आमा हिजोजस्तै आज पनि परित्यक्त छन् ।
जिल्लाका १२ वटै स्थानिय तहले पनि अब बालबिवाह न्यूनिकरणमा बार्षिक बजेट खर्च गर्नु जरुरी छ । सरकारी तथा गैर सरकारी संधसस्थाले र बाल क्लबले पनि आफ्नो कामलाई अझ सशक्त रुपमा लैजान जरुरी छ । त्यसका साथै बिद्यालयले बाल बिवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम लागु गरी बिद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा अझ प्रभावकारी हुने छ । बाल बिवाह गरेर जाने किशोरीहरूको बिवाहदर्ताको प्रकृयालाई स्थानीय तहले कडाई गर्न पनि ढिला भईसकेको छ ।